Raw Unifiram vovoka (272786-64-8) - Manufacturers - Phcoker Chemical
Raw Unifiram vovoka (272786-64-8)
Ny poofa Raw Unifiram (DM-232) dia AMPAkine tena goavam-be izay tsy misy loatra amin'ny antiamenika sy ny fampihetseham-pandrenesana eo amin'ny ....
fahafahana: 1180kg / volana
SKU: 272786-64-8 Sokajy: Drug Smart
Raw Unifiram vovoka (272786-64-8) video
Raw Unifiram vovoka (272786-64-8) Description
Ny vovon-tsolotsaina Raw Unifiram, fantatra ihany koa amin'ny DM-232, dia zava-mahadomelina vaovao tsy misy taratra. Ny rafitra dia tahaka ny Ampakine, ary mifandray akaiky amin'ny vovony SRaw Unifiram. Raw Unifiram vovoka no iray amin'ireo fitaovana maoderina indrindra amin'ny atidoha, ary misy antiamenika sy fiantraikany hafa amin'ny fianarana biby miaraka amin'ny hery avo lenta avo arivo heny noho ny piracetam. Ny vovon-tsolika Unifiram dia aseho amin'ny fampihenana ny faharetan'ny hypnose vokatry ny pentobarbital, nefa tsy manelingelina ny fandrindrana ny motera. Raw Unifiram ny poopérature dia ADPA mpanindrahindra ny ADO.
Raw Unifiram vovoka (272786-64-8) Specifications
Product Name Raw Unifiram vovoka
Anarana simika DM-232, CHEMBL140717, CTK0J2726, DTXSID00432024, AKOS017975218,2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one;(8aR)-2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one;Pyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one, 2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]hexahydro-
Brand Name Tsy misy angona azo ampiasaina
Drug Class Nootropics
CAS Number 272786-64-8
molekiolan'ny Formula C13H15FN2O3S
molekiolan'ny Wvalo 298.3332032
Monoisotopic Mass 298.079 g / mol
mitsonika Point Tsy misy angona azo ampiasaina
Freezing Point Tsy misy angona azo ampiasaina
Ny antsasaky ny biolojia 4-6 ora
Solubility Rano tsy mety ritra
Storage Temperature TEMPERATURE ROOM
Raw Unifiram vovoka Application Alzheimers Dementia, Fitsaboana aretina miafina, Fitsaboana DRUGS NEUROLOGIC
Unifiram powder (272786-64-8) Ny fomba fiasa?
Ny Unifiram dia modifier amin'ny toetr'andro mampiavaka ny AMPA mpandray anao. Amin'ny Ampakine, ny tsiranoka Unifiram dia miteraka fanafody ao amin'ny atidoha izay mahatonga ny fifindran'ny synaptika tsara kokoa amin'ny neurons.
Mampirisika ny famokarana acetylcholine ihany koa i Unifiram, izay mampitovy ny fihetsika ataony amin'ny Noopept, Pramiraceta, Oxiracetam ary ny racetam nootropics hafa.
Vitsy ny fikarohana tao amin'ny Unifiram noho i Sunifiram mpiara-monina, saingy mifandray akaiky sy mifamatotra amin'ny fomba mitovy amin'izany ireo akora simika roa ireo.
soa of Unifiram powder (272786-64-8)
Tahaka ny Racetams, i Unifiram dia heverina fa hanatsara ny fianarana, ny fahatsiarovana, ny fifantohana, ny hery ara-tsaina ary ny fahalalana fototra.
soso-kevitra Unifiram powder (272786-64-8) Dosage
Ireo olona te hampiasa ny vovobony unifiram dia tokony hanomboka amin'ny dosia kely rehefa manombana ny fiantraikan'ny Unifiram amin'ny vatany. Azo ampitomboina ny dosage raha ampiasaina amin'izany ny vatany. Azonao atao ny manomboka amin'ny 5 miligrama isan'andro.
Side effects of Unifiram powder (272786-64-8)
Amin'ny toe-javatra sasany dia mitatitra ny taham-pihetseham-po. Mety hiteraka fiakaran'ny tosidra izany. Raha toa ny fitsaboana poezia tsy miteraka, dia miteraka fanaintainana ny taha-malemy sy ny aretina. Amin'ny tranga hafa dia azo atao ny manoratra ny fihoaram-pefy sy ny fihenan'ny tsinay. Hatreto, tsy misy fifanoherana momba ny Unifiram sy ny fanafody na ny fanafody hafa.
FIVAVAHANA SY FANADIKANA:
Ity akora ity dia amidy amin'ny fampiasana fikarohana. Ampiharo ny fepetra momba ny varotra. Tsy an'ny fahazoan-dàlana maha-olombelona, ​​na ny fitsaboana, ny fanadinam-bokatra na ny fampiasana an-tokantrano.
Rojo NSI-189 vovoka Phosphate dia sehatr'asa marobe miserônika manana tranon-tsakafo misy atidoha manana potentiela .......
Rohato Oxiracetam roah (62613-82-5)
Ny poofa Roira Oxiracetam dia nodinihina ho fitsaboana mety ho an'ny fahavoazana fahatsiarovan-tena mifandraika amin'ny aretin'ny Alzheimer sy ny neurologique hafa ..........
Roiws Base Base NSI-189 Base (1270138-40-3)
Ny vovo-bazaha fototra NSI-189 dia experimental, potika antidepressanta izay nohadihadian'ny Neuralstem, Inc. ho an'ny ....
fahafahana: 1460kg / volana
Raw (R) -Oxiracetam poids (68252-28-8)
Raw (R) -Oxiracetam poids (famandrihana code ny anarana ISF 2522) dia fanafody tsyotropic ny fianakaviana racetam ary tena mild .......
fahafahana: 1420kg / volana